Ukuphupha nge-chainsaw Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ▷️
I-chainsaw isebenza ngepetroli okanye kwimoto yombane, okanye iqhuba ngokomoya okanye ngombane. Imixokelelwane yemixokelelwano yesandla ihlala ithengiswa kwiivenkile zehardware, onokuthi ngazo usike okanye uwise imithi efana nepoplar, i-beech okanye i-fir imithi kunye nemithana egadini yakho yasekhaya. Izixhobo zamandla amakhulu zisetyenziswa ikakhulu kwiziza zokwakha, emahlathini nakwinkonzo yomlilo. Abanye abakroli bemithi kunye nabomkhenkce ngamanye amaxesha basebenzisa i-chainsaw ukwenza imisebenzi emangazayo yobugcisa.
Xa umntu ephupha nge-chainsaw, ihlala iliphupha. Ngokunokwenzeka umphuphi ubone enye yeemovie ezininzi Uloyiko apho kukho ukubulawa ngenene okwenziwe nge-chainsaw. Mhlawumbi usebenzisa esi sixhobo ephupheni kuba silungele injongo yakho, kuba ubungathanda ukuba ngumgawuli wemithi njengomntwana. Ukutolikwa kwamaphupha, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba inkqubo yephupha yayinjani kwaye yeyiphi eyona ndima idlalwe kwiphupha.
1 Uphawu lwephupha «chainsaw» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «chainsaw» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «chainsaw» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «chainsaw» - ukutolikwa ngokubanzi
I-chainsaw njengophawu lwephupha ihlala iphakamisa umbuzo wokuba liphi iphupha ekufuneka lahlulwe kulo. Yintoni ofuna ukuyilungisa kwaye uyile ngokutsha endaweni yoko? Kwiphupha, ukutolikwa kwesixhobo kubhekisa kwinto enye ukusika okukhulu kubomi bamaphupha. Utshintsho, olubangelwa kukwahlukana kweemeko okanye komntu, kunokuba luncedo ekuphupheni.
Ukusebenza ne-chainsaw ephupheni kungathatha umzamo, kodwa umgudu uya kuba nomvuzo. Ukuba isixhobo asisebenzi kakuhle ngoku, oko kuthetha ukuba ekutolikeni amaphupha umntu ukhethe indlela engalunganga kwaye ke ngekhe aphumelele. Ukuba usika i-bark yomthi nge-chainsaw okanye ushiye isiphunzi simile, mhlawumbi uyazenzakalisa ngenxa yokuvulwa kwayo okukhulu.
I-chainsaw eqhutywa ngasemva ifuzisela enye uxanduva olukhululeyo, nangona kunjalo, inegalelo kwinto ekuphupheni. Ukuba ukhuni lusarhwa kunye nesimboli yephupha, kuvela ubunzima ekufuneka boyisiwe. I-chainsaw esebenzayo imele ukutolikwa kwamaphupha lishishini eliza kuvelisa inzuzo efanelekileyo.
Kwiphupha labasetyhini, uphawu lwephupha lubonisa uxabiso lomntu wakhe kunye neengcebiso. Ingxolo ye-chainsaw ibonisa ukonga kunye nokuchuma, ke amaphupha anokukwazi ukuphumla kunye nokuphumla.
Uphawu lwephupha «chainsaw» - ukutolikwa kwengqondo
I-chainsaw ngumqondiso wephupha lamava agqithisileyo kubomi babaphuphi. Uphawu lokuchazwa kwamaphupha. Amandla, ubundlongondlongo y Ukuzithemba. I-subconscious ixelela umntu ophuphayo ukuba kufuneka azenze azikhulule kwimeko engathandekiyo. Zingaba ziimeko zokuphila eziphathekayo, kodwa kunye neemeko ezingonelisiyo ngokweemvakalelo.
Ukwahlula eziqulethwe ngomfanekiso chainsaw akuyomfuneko ukuba uqale ephupheni. Ukulala nako kunokuchaphazela Iinjongo zokwahlukana yalatha kumhlobo. Ukuphela kobudlelwane kuhlala kubandakanya isiqalo esitsha, ukuze iphupha eloyise kwaye liyenze.
Ngaphantsi kweemeko ezithile, uphawu lwephupha "chainsaw" ekuchazeni iphupha nalo linokubonisa iintlungu zomphefumlo ezingenakuphinda zenzeke. Oku kunjalo ngakumbi ukuba isixhobo asisebenzi ephupheni, kwaye ke ngenxa yoko ukusika okuyimfuneko akunakwenzeka. Ukuphupha ngokungakhathali ulangazelela i ukujongana okokugqibela amava oxinzelelo. Olunye utoliko olunokwenzeka lwesimboli yephupha yi-chainsaw njengophawu lobudoda, apho kuboniswa khona iminqweno yesini yokuphupha.
Uphawu lwephupha «chainsaw» - ukutolika kokomoya
Njengesixhobo, i-chainsaw yinkcazo yamaphupha. ubutyebi bokomoya. Injini ibonisa ukukhuthazeka kunye nokuqhuba. Uphawu lwephupha lunokufuzisela uthando kunye nokuzinikela kwinqanaba lokomoya.